Japàna - Wikipedia
Teny filamatra : Tsy misy
Teny ofisialy Japoney
Tanàna lehibe indrindra Tokyo
- Praiminisitra Fanjakana entin'antenimiera
Fumio Kishida (岸田 文雄)
- Rano (%) faha 62
377 975 km²
- Tontaliny (2020)
- hakitroka faha 10
126 226 568 mpo.
Anaran'ny mponina Japoney
IDH (2019) midina 0.919 (ambony) faha-8
Sandam-bola Yen (JPY)
Faritr'ora UTC +9
Hiram-pirenena Kimi ga yo
I Japàna dia firenena ao atsinanan' i Azia. Ireo firenena manodidina azy dia i Korea Atsimo sy Avaratra, Sina ary Rosia. Atao hoe 日本 Nippon na Nihon na (anarana ôfisialy) 日本国 Nihonkoku) izy min' ny fiteny japôney. I Japàna dia tangoro-nosy manana halava 2500 km eo ho eo misy nosy efatra lehibe, dia i Honshu, i Hokkaido, i Kyushu ary i Shikoku. Ao amin' ireo nosy efatra ireo ireo ny 97 %n' ny mponina manontolon' i Japàna, izay miisa 126 tapitrisa mponina. I Tokyo izay manana mponina 30 tapitrisa no renivohitra ary tanàna lehibe indrindra ao Japàna ary eto amin' izao tontolo izao.
Manana morontsiraka mirefy 30 000 km any ho any ity firenena ity. Tendrombohitra no mandrakotra 75 %n’ ny tanin’ i Japàna. Mangatsiaka ny toetany any avaratra izay andalovan’ ny rivotra avy any Siberia fa andalovan’ ny rivodozan-janapehin-tany kosa avy any Azia ny ao atsimo.
Ambony ny hakotroky ny mponina izay mahatatra 2 000 isaky ny km2 ao amin’ ny faritra sasany fa 13 000 any ho any izany ao Tokyo renivohitra, izay tanàna ngeza indrindra maneran-tany. Tandrenivohitra ny ankabetsahan’ ny mponina any Japàna izay mahatratra 80 %, ary ny tangoron-tanànan’ i Tokyo no onenan’ ny 20 %n’ ny mponina ao amin’ ity firenena ity.
I Japàna no firenena matanjaka ara-toekarena faharoa maneran-tany, aorian’ i Etazonia. Taorian’ ny Ady Lehibe Faharoa no nanombohan’ ny tena fandrosoany. Miroborobo ny taozava-baventy any Japàna, izay mitana ny laharana voalohany amin’ ny seha-pamokarana maro toy fanamboarana fitaovana elektrônika sy ny fanamboarana fiarakodia. Ny Yen no vola miasa any, izay ampiasaina betsaka amin’ ny raharaham-barotra maneran-tany, ankoatra ny dôlara sy ny eorô.
Miteny ny maribolana fa foaforona tamin' ny taonjato faha-7 tal. J.K. ny Japàna, ary ny mpanjaka Jimmu hono no namorona azy. Tafiditra tany Japàna ny fomba fanoratan' ny Japôney ankehitriny; ary ny pretra no nampiditra azy tany.
Tsy tena mitondra ny mpanjaka, any amin' ny tanan' ny andriana ny hasina.
↑ Endrika:Category handler/numbered ozy ny[http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kihon1/00/01.htm Statistics Bureau of Japan
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Japàna&oldid=1046068"
Dernière modification le 30 Jiona 2022, à 11:52
Voaova farany tamin'ny 30 Jiona 2022 amin'ny 11:52 ity pejy ity.